तपाईंको शरीरको ADME प्रक्रिया जब तपाईं औषधि लिनुहुन्छ - औषधि जानकारी | सेप्टेम्बर 2021
औषधि जानकारी, स्वास्थ्य शिक्षा कम्पनी, चेकआउट कम्पनी, स्वास्थ्य शिक्षा कम्पनी स्वास्थ्य शिक्षा, कल्याण कल्याण समुदाय, कम्पनी समाचार, कल्याण घरपालुवा जनावर स्वास्थ्य शिक्षा, घरपालुवा जनावर औषधि बनाम मित्र मनोरञ्जन चेकआउट औषधि जानकारी भारी खेल
मुख्य >> औषधि जानकारी >> तपाईको शरीर भित्र के हुन्छ जब तपाई औषधि लिनुहुन्छ?
तपाईको शरीर भित्र के हुन्छ जब तपाई औषधि लिनुहुन्छ?
एउटा गोली निल्छ, केहि बेर प्रतिक्षा गर्नुहोस्, राम्रो लाग्छ - सरल, हैन? ठ्याक्कै होइन।
ADME प्रक्रिया के हो?
एक औषधि तपाईंको शरीर को माध्यम बाट यात्रा - फार्माकोकाइनेटिक्स भनिन्छ फार्माकोलजी भित्र एउटा अनुशासन - केहि सरल तर केहि छ। औषधि तपाईंको शरीरमा गएपछि यो छोड्ने समयसम्म, धेरै कुरा हुन्छ। वैज्ञानिकहरूले प्रक्रिया ADME डब गरेका छन्, शोषण, वितरण, चयापचय र अन्तमा उत्सर्जनको लागि छोटो। तर कसरी, ठीक, एक औषधि पोइन्ट A (शोषण) बाट पोइन्ट E (उत्सर्जन) मा जान्छ? हामीले विज्ञहरूलाई सोध्यौं।
अवशोषण ड्रगको वितरण प्रणालीमा धेरै निर्भर गर्दछ। Injectables अवशोषण चरण बाईपास किनभने तिनीहरू सीधा रक्तप्रवाहमा वितरित गरियो। तर हामीले घरमा लिने धेरैजसो औषधीहरू गोली वा क्याप्सूलको रूपमा हुन्छन्, र ती पेट वा ग्यास्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्र्याक्ट (पेट) मा समाहित हुनु पर्छ। वैज्ञानिक बोलीमा, औषधि घुलनशील हुनु आवश्यक पर्दछ यसले रक्तसंचार प्रणालीमा पहुँच पुर्‍याउन अघि।
सीधा ध्वनि, तर, चिकित्सा को धेरै चीज जस्तै, यो छैन। पेट र पेटको एसिडिटी, साथ साथै औषधि आफैको श्रृंगारले, अवशोषणलाई असर गर्न सक्छ। औषधिको निर्माणमा प्रयोग भराव र कोटिंग्सका लागि डिट्टो।
पेटमा अम्लीय वातावरण छ, कोलिन क्याम्पबेल भन्छन, पीएचडी, फार्माकोलोजीको सहयोगी प्राध्यापक मिनेसोटा मेडिकल स्कूल को विश्वविद्यालय मिनियापोलिस मा। हामी जसलाई कमजोर एसिड ड्रगहरू भन्छौं, त्यहाँ एस्पिरिन, राम्रोसँग समाहित हुन्छन्। तर मोर्फीन जस्ता कमजोर आधार औषधिको सुस्तता छ, किनभने यो इन्जेक्सन दिएन भने यो पेटको उच्च एसिड वातावरणबाट पनी पेटको अधिक तटस्थ वातावरणमा प्राप्त गर्नुपर्दछ।
citalopram र escitalopram बीच के फरक छ?
एक ड्रगले रक्तप्रवाहमा पहुँच प्राप्त गरे पछि, रगतले यसलाई शरीरको टिश्युहरूमा वितरण गर्दछ।
यो कसरी हुन्छ ड्रगको सम्पत्तीमा धेरै निर्भर गर्दछ।
उदाहरण को लागी, फ्याट-घुलनशील ड्रग्स (जस्तै प्रेडनिसोन , एक स्टेरोइड ईन्फ्लेमेसनको उपचारको लागि प्रयोग गरिएको छ) फ्याट सेल्सहरू खोज्नुहोस् जहाँ तिनीहरू सजिलैसँग विघटन गर्दछन् र सेल झिल्लीबाट पार हुन्छन्। पानीमा घुलनशील औषधिहरू, जस्तो कि atenolol , उच्च रक्तचापको उपचार गर्न प्रयोग गरिएको, रगतमा र अभाव तरल कोषहरू वरिपरि रहन।
वितरणलाई असर गर्ने अर्को कारक हो कि यो औषधि ठूला वा सानो अणुहरू मिलेर बनेको छ। चिकित्सीय रूपमा प्रयोग गरिने धेरै जसो औषधिहरू साना अणु औषधि हुन् - र राम्रो कारणका लागि। सानो अणु ड्रग्स, जस्तै Nexium (ग्यास्ट्रोएफिजियल रिफ्लक्स रोगको उपचारको लागि प्रयोग गरिएको), सेल झिल्लीबाट सजिलै पार गर्नुहोस् ताकि तिनीहरू आफ्नो यात्रा जारी राख्न सक्दछन्। ठुलो अणु ड्रगहरू, जस्तै इन्सुलिन, कठिन झिल्ली झिल्को हुन्छ र ईन्जेक्सनद्वारा दिइन्छ।
मिरेना तपाइँ वजन प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ
मेटाबोलिज्म, जसलाई बायोट्रान्सफॉर्मेसन पनि भनिन्छ, सामान्यतया कलेजोमा हुन्छ।
वितरणको बखत, औषधि कलेजोमा प्राकृतिक प्रक्रिया मार्फत वा अ what्गहरूको कोषहरूमा अवस्थित ट्रान्सपोर्टरहरू भनिन्छ को सहयोगमा ढुवानी गरिन्छ। कलेजोमा रहेका विशेष एन्जाइमहरूले रासायनिक रूपमा औषधि परिवर्तन गर्दछ र यसलाई सजिलैसँग उत्सर्जित गर्न सकिने फाराममा रूपान्तरण गर्दछ।
तर त्यहाँ एउटा क्याच छ। कलेजोलाई असर गर्ने मुद्दाहरूमा औषधि कत्तिको चाँडो भाँचेको छ भनेर प्रभाव पार्न सक्छ। सिरोसिस (वा कलेजो को दाग को लागी), उदाहरण को लागी, एक औषधी metabolized गर्न को लागी कडा बनाउन को लागी बनाउन सक्छ, यो शरीर मा अब रहन। केही औषधिहरू मिर्गौलामा पनि मेटाबोलिज हुन्छन्।
र केहि औषधिहरूले मेटाबोलिizing्ग इन्जाइमहरू वा ट्रान्सपोर्टरहरूलाई निष्क्रिय गर्न सक्दछन्, एफडीएको क्लिनिकल फार्माकोलजीको कार्यालयमा लेबलिंग र स्वास्थ्य संचारका लागि सहयोगी निर्देशक जोसेफ ग्रिलो, फर्म डीडी भन्छन्। यसले शरीरमा लामो समय र आवश्यक भन्दा बढी मात्रामा लागूपदार्थको नतिजा निम्त्याउँछ, विषाक्तताको सम्भावना बढाउँदै, उनी भन्छन्।
उत्सर्जन एक प्रक्रिया हो जसद्वारा शरीर आफैंमा औषधि खोल्छ, र त्यो किडनी र उनीहरूले बनाउने मूत्र मार्फत प्रयोग गरिन्छ। यदि औषधि सजिलै मिर्गौलाद्वारा फिल्टर गरिएको छैन भने यसलाई कहिलेकाँही कलेजोले पनि परिवर्तन गर्न सक्दछ ताकि बाँकी रहेका मानिसहरूले पिसाबमा जान सक्छन्। मिर्गौलाहरूले फिल्टर गर्न असमर्थ लाग्ने ड्रग्स कलेजोमा पित्तल नलिकाको माध्यमबाट जान्छ र शरीरमा मलको माध्यमबाट छोडिन्छ।
के म गर्भवती हुँदा pepto बिस्मोल पाउन सक्छु?
ADME भन्दा पर: के तपाईंलाई थाहा हुनु पर्छ
धेरै कारकहरूले तपाईंको शरीरले कसरी एक औषधि प्रशोधन गर्दछ। शुरुवातकर्ताहरूको लागि, त्यहाँ छ:
उमेर । पुरानो अंगहरू कान्छो जत्तिकै प्रभावकारी ढ operate्गले काम गर्दैनन्, जसको मतलब हो कि तपाईंको कलेजो, पेट, वा मिर्गौलाले २ at मा औषधि प्रशोधन गर्ने तरिका at 65 भन्दा फरक हो। वृद्ध मानिसहरूले लिने औषधिहरूले पनि प्रक्रियालाई असर गर्न सक्छ।
लि .्ग । किनकि हामी शरीरको तौल, फ्याट, शरीरको पानीको मात्रा, अंग र र हार्मोनको स्तरमा रक्त प्रवाहमा फरक हुन्छौं, पुरुष र महिलामा एडीएमई फरक हुन सक्छ।
पेट सामग्री । यहाँ कुनै ठूलो शकर छैन। त्यो चीजबर्गर र फ्राईले तपाईले खाएको औषधि सेवन गरेपछि औषधीको यात्रा सुस्त हुन सक्छ। धेरै खाद्य पदार्थ पेटमा राम्रोसँग अवशोषित हुन्छन्, क्याम्पबेल भन्छन्। तर पूर्ण पेटले अवशोषणलाई ढिलो गर्नेछ र औषधिलाई जठरांत्र प्रणालीमा जानको लागि लामो समय लिन सक्दछ। अर्कोतर्फ, केहि औषधीहरू राम्रो अवशोषणको लागि खानाको साथ लिनुपर्दछ।
तल लाइन? निर्देशनहरू पालना गर्नुहोस्। प्रिस्क्रिप्शन बोतल लेबल र कुनै सम्मिलित सामग्री ध्यानपूर्वक पढ्नुहोस्, र यदि तपाईंलाई स्पष्टीकरण चाहिन्छ भने प्रश्नहरू सोध्नुहोस्, डा। ग्रिलो भन्छन्।
Terconazole vs. miconazole: मतभेद, समानताहरू, र जुन तपाईंको लागि राम्रो छ
Xarelto के हो?
के तपाइँ lunesta र ambien सँगै लिन सक्नुहुन्छ
उपवास पछि तपाइँको रक्त शर्करा के हुनुपर्छ?
सबै भन्दा राम्रो तरीका एक खमीर संक्रमण छिटो बाट छुटकारा पाउन
राम्रो खाना ज्वरो संग खान को लागी
कति समय पछि तपाइँ सेक्स योजना लिनु पर्छ बी
त्यहाँ कुनै जोखिम छैन जब चिन्ता को उपचार को लागी औषधि लिने
कहिले सम्म vyvanse को 30mg अन्तिम हुनेछ